eBook Archive - Joyce Meyer Ministries - Twi
KA KYERƐ WƆN SƐ ME DƆ WƆN
Me gyedi sε deε nnipa hia kyεne biribiara yε Onyankopͻn dͻ a ͻwͻ ma wͻn sε ankoranko no ho adiyie. Saa nteaseε yi yε fapem a yε ne N’ayͻnkofa no gyina soͻ. Ɛno ara nso na εma yεn nkunimdie wͻ kristosom abrabͻ mu. Ɛnyε adwene mu nimdeε a εfa Nyankopͻn dͻ no ho nkoara na εhia, na mmom deε yεhia paa yε Ne dͻ no ho adiyie wͻ yεakoma mu. Honhom Kronkorn nkoara na ͻtumi ma wei, na ͻbεyε saa, berε a yεdwendwene Nyankopͻn dͻ no ho, gye Ne dͻ a εwͻ yεabrabͻ mu no tom, na yεnam Nyankopͻn nsεm a wͻatwerε εne mpaebͻ so hwehwε saa adiyie no.
Woregye atom sε Onyankopͻn dͻ wiase yi nti na ͻsomaa Yesu sε ͻmmεwu ma obiara bͻne no nnyε den bebree. Na mmom woregye adi sε Onyankopͻn dͻ wo ankasa mmorosoͻ sε, anka wo nkoara ne onipa a wowͻ asase yi so a, anka ͻbεsoma Yesu sε ͻmmεwu mma wo no deε, εtumi yε den paa ma nnipa sε ͻbεgye adie. Mfeε bebree a na meyε kristoni a m’aba mu abu na mennhunu deε meyε akyi no, me nyaa Onyankopͻn dͻ a ͻwͻ ma me no ho yikyerε. Onyankopͻn nam N’adom no ne Honhom Kronkron so daa Ne dͻ a ͻwͻ ma me sε ankoranko no adi kyerεε me. Na saa yikyerε baako yi na asesa m’abrabͻ koraa, na me ne N’ayͻnkofa no nso ayε foforͻ.